Bixiyeyaasha Cunnada iyo Warshad - Soosaarayaasha Quudinta Cunnada Shiinaha
Faahfaahinta alaabta Balerku waa nooc ka mid ah mashiinnada baling caws oo si otomaatig ah u dhammaystiri kara ururinta, isu geynta iyo xoqidda bariiska, qamadiga iyo jirida galleyda ayaa ka dhigi doona Round Hay Baler. Waxaa si ballaaran loogu isticmaalaa aruurinta daaqa qallalan iyo cagaarka, bariiska, qamadiga, iyo jirida galleyda. Xirashada Mashiinka wuxuu leeyahay astaamaha qaabdhismeedka is haysta, hawlgal habboon iyo kalsooni sare. Daaqsinka xirmooyinka ah ayaa loo isticmaali karaa quudin ahaan, iyadoo la keydinayo kharashka ku baxa quudinta lo'da iyo idaha. U dhigma p ...
Faahfaahinta Waxsoosaarka 65Mn dabacsanaan sare guga-iliga ayaa hubinaysa in geedkan ay la jaan qaadi karto qaabab kala duwan oo dhul ah. Gacanteeda dhagaxan waxay u rogi kartaa 90 digrii, si markaa loogu fududeeyo cagaf-cagafku inuu uga hawlgalo beeraha. Dhanka kale, xagalka wadajirka ah waxaa lagu hagaajin karaa inuu la kulmo shuruudo kala duwan. Nooca Farsamaynta Nooca Farsamada Qaybta 9LZ-2.5 9LZ-3.0 Ballaadhinta mm 2500 3000 Awood isku mid ah hp ≥15 30-40 Qty kumbuyuutaro cajalado ah 4 5 Baaxadda Swath mm 500-1500 ...
Faahfaahinta alaabta Mashiinka cajaladda cawsku wuxuu ku habboon yahay in lagu laallaado aaladda saddexda-dhibic ganaax ee cagaf cagaf. Qaybta shaqada waa saxanka ilkaha leh. Mashiinka raajada cawska waxaa loo gudbiyaa saxanka farta dambe oo is xigxigta iyadoo la adeegsanayo saxanka farta ilaa laga sameynayo xarigga cawska ee dabacsan oo hawo leh. Beddel xagasha saxanka farta oo hagaajin kara ballaca baarka cawska. Ilko duudduuban ilkaha birta guga oo dheer, shanlaynaya saamaynta wanaagsan, waxqabadka koobiyeynta oo xoog leh. Rak ...
Mashiinka Mashiinka Mashiinka Mashiinka 'pellet feed' waa mashiinka ka baaraandegidda quudinta oo si toos ah u cadaadinaysa alaabada la shiiday ee galleyda, cuntada soybean, caws, caws, buudka bariiska, iwm. Mashiinka wuxuu ka kooban yahay mashiinka korontada, sanduuqa marshada, mashiinka wadista, saxanka dhinta, rullaluistemadka saxaafadda, qoob-ka-quudiyaha qubeyska, goynta, iyo qulqulka dheecaanka. Si ballaaran ayaa loogu isticmaalay dhul-beereedka waaweyn, dhexdhexaad iyo yar, dhirta ka baaraandegidda quudinta, beeraha xoolaha, beeraha digaagga, shaqsiyaadka beeraleyda ah iyo beeraha yaryar iyo kuwa dhexdhexaadka ah, beeraha ...
Faahfaahinta Badeecadda Makiinada bur ayaa lagu kaxayn karaa matoor koronto ama mishiin naafto ah. Waxay shiidi kartaa geedo kala duwan, bariis, galley, iyo miraha kale. Dukaan, geedo yaryar, jilif, caleemo, buunshaha qamadiga, buunshaha bariiska, cobs-ka hadhuudhka, cawska, badarka, haley qalalan, kaluunka, kaluunka, khudaarta fuuq baxday, hawthorn, dhir udgoon, timir, vinasse, keeg, hadhaaga baradhada, shaaha, digirta, Cudbiga , xididdada dhirta, jirridaha, caleemaha, ubaxa, miraha, boqolaal nooc oo ah fangaska la cuni karo iyo waxyaalaha kale ee ceyriinka ah ee ay adagtahay in laga shaqeeyo ...
Faahfaahinta alaabta Mashiinka dubbeyaasha mashiinka ayaa ku habboon jirridaha hadhuudhka, jirida qamadiga, jirida digirta, suufka iyo noocyada kale ee dalagyada. Waxay ku guntan kartaa gabal yaryar. Mashiinka samaynta shilalka galeydu wuxuu hagaajin karaa heerka daaqa xoolaha, heerka cunidda iyo dheefshiidka. Isla mar ahaantaana, waxay sidoo kale shiidi kartaa dalag kasta, galley, qamadi, soybeer, waxayna ku shiidi kartaa bur, oo nadiif ah oo nadiif ah, waana la cuni karaa. Mashiinka waa mishiin labo ujeedo leh oo macquul ah ...
Faahfaahinta Waxsoosaarka Mashiinka jirida cawska waxaa loo isticmaalaa in lagu gooyo jirridda hadhuudhka (qalalan), caws qamadiga, cawska bariiska iyo jirridda kale ee daaqa iyo daaqa. Qalabka la farsameeyay wuxuu ku habboon yahay taranka lo'da, idaha, deerada, fardaha, iwm, sidoo kale wuxuu ka baaraandegi karaa jirridda cudbi, laamood, jilif, iwm., Si loogu isticmaalo warshadaha sida soo-saarka tamarta caws, soo saaridda ethanol, sameynta waraaqaha, iyo qoryaha alwaaxyada salka ku haya. Waxaa lagu waafajin karaa mashiinka naaftada ama matoor koronto ahaan awood ahaan. Mabda'a Shaqada ...
Faahfaahinta alaabta RYAGRI mashiinka hadhuudhka ee hadhuudhka lagu tumo waxaa si weyn loogu isticmaalaa dhaqashada xoolaha, beeraha, iyo isticmaalka qoyska. Waxaa badanaa loo isticmaalaa in lagu tunto hadhuudhka iyada oo aan waxyeello loo geysanaynin masaxyada waxayna leedahay astaamaha qaabdhismeedka macquulka ah, waxqabadka deggan, iyo hawlgalka fudud. Marka loo eego baahida macaamiisha, waxaan ku siin karnaa hadhuudhleyda waxqabadyo kala duwan oo shaqo. Meerisyadan hadhuudhku waxay ku dhici karaan cagaf PTO wada, sidoo kale waxay la mid noqon karaan matoorada naaftada ama matoorrada. Faa'iidada 1. Mashiinka waa la dhaqaajin karaa oo ...